विशेष Archives ~ Page5of 34 ~ Banking Khabar
नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै व्याजदर करिडोर लागू गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त व्याजदर करिडोरमा परिमार्जन गरी बुधबारदेखि लागू गरिएको छ । व्याजदर करिडोरले व्याजदरको एउटा सुरुङ निर्माण गर्छ …
राष्ट्र बैंकले तोक्यो ‘व्याजदर करिडोर’
बैंकिङ खबर । बुधबार(कात्तिक २९ गते)देखि ब्याजदर करिडोर लागू भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारबाट ब्याजदर करिडोर लागू गरेको हो । यसअघि आफैँले व्याजदर निर्धारण गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब …
बैंकर्सलाई अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिका कारण बैंकहरुको संख्या घटिरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने अभियानका कराण बैंकहरुको शाखा बढेपनि अब बैंकको संख्या बढ्दैन । बरु अझै घट्ने सम्भावना छ । वाणिज्य बैंकहरु २८ नै कायम …
अधिकांश वाणिज्य बैंकको खस्कियो नाफा
बैंकिङ खबर । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालसम्म २५ वटा बैंकले विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक विवरणअनुसार, केही बैंकहरुको मुनाफा सन्तोषजनक भएपनि केही बैंकले लगानीकर्तालाई निराश बनाएका छन् । …
फेरि ढाँट्दै दलहरु, घोषणपत्रभरि विकास
बैंकिङ खबर । चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरु विभिन्न आर्थिक एजेन्डाहरुसहितका घाषणापत्र जारी गरी जनतालाई लोभ्याउने प्रतिष्पर्धामा जुटेका छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आफ्ना …
‘बाम गठबन्धन’ देखेर तर्सियो सेयर बजार
बैंकिङ खबर । लामो समयदेखि सेयर बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । दशैँलगत्तै भएको बाम गठबन्धनले सेयर बजारमा गहिरो प्रभाव परेको छ । गत असोज १७ गते प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच बाम गठबन्धन भयो । …
२३ वाणिज्य बैंकको रिपोर्ट : कसको नाफा कति ?
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालसम्म २३ वटा बैंकले विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक विवरणअनुसार, केही बैंकहरुको मुनाफा सन्तोषजनक भएपनि केही बैंकले लगानीकर्तालाई निराश बनाएका छन् …
मर्जरको रस्साकस्सीमा फाइनान्स कम्पनीहरु
रोयल आचार्य/बैंकिङ खबर ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या झन् झन् घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकको पूँजी वृद्धिको योजना अघिसम्म मुलुकमा ८८ वटा फाइनान्स कम्पनी थिए । तर अहिले ती फाइनान्स घटेर २७ वटामा झरेका छन् । यीमध्ये अझै …
बैंकिङ क्षेत्रमा मजबुद देखियो सरकारी लगानी
बैंकिङ खबर । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको हरेक क्षेत्र पछाडि परेको छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी भइरहेको छ । सरकारी संस्थाहरुमा अझ कामभन्दा बढी राजनीति हुने गरेको छ । सरकारी कलेज, स्कुल अथवा अन्य संस्थामा समेत राजनीति भइरहँदा सरकारी …
‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’का योजनाकारले कस्तो बनाउलान् ‘सेञ्चुरी बैंक’ ?
रोयल आचार्य/बैंकिङ खबर – ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’ भन्ने नाराका योजनाकार अनिल केशरी शाहले अब सेञ्चुरी कमर्शीयल बैंकको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । हाल मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका शाहले सेञ्चुरी बैंकमा जाने औपचारिक सहमति भइसकेको बैंकिङ खबरलाई बताए । ‘सेञ्चुरी कमर्शीयल …